दलहरुलाई करिश्माको कटाक्ष- जनतालाई मर्का पर्दा नबोल्ने, आफैंलाई परेपछि सडकमा ? – Nepal Press
दलहरुलाई करिश्माको कटाक्ष- जनतालाई मर्का पर्दा नबोल्ने, आफैंलाई परेपछि सडकमा ?
२०७७ माघ ८ गते १४:२३
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रेका राजनीतिक दलहरुप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । जनतालाई मर्का पर्दा मौन बसेका दलहरु आफैंलाई मर्का पर्दा कोरोना बिर्सेर सडकमा भिडभाड गर्न निस्केको उनको टिप्पणी छ ।
फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै करिश्माले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेकी हुन् । हिजो मात्रै उनले पार्टी सिस्टम काम नभएको भन्दै राजा राख्नुपर्ने पक्षमा वकालत गरेकी थिइन् । यही सिलसिलामा उनले आज अर्को स्टाटस लेखेकी हुन् । ‘के मैले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा मेरो कुरा राख्नै नपाउने हो त ?’ भन्दै करिश्माले प्रश्न गरेकी छन् ।
‘जनतालाई मर्का पर्दा सडकमा नआउने तर संसद विघटन भएर आफैंलाई मर्का परेपछि सडकमा आउने, भिडभाड बढाएर भाषण गर्ने दल र नेतालाई म कसरी राो काम गरिरहेका छौ भनेर भनौं ? राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली, व्यवहार र चिन्तन जनपक्षीय छ भनेर कसरी झूट बोलुँ ?’
उनी आफू नेपाल राज्यको स्वतन्त्र नागरिक भएको बताउँदै राजनीतिक दल र नेताको भन्दा देश र राष्ट्रियताको माया लाग्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
प्रकाशित: २०७७ माघ ८ गते १४:२३